Wararka - Saxanka Dabiiciga ah ee Slate
Saxanka Dabiiciga ah ee Slate
Shaxda Slate Plates sets waxay leeyihiin laba faa'iidooyin oo kala duwan marka la barbar dhigo kuwa caadiga ah:
Marka hore, waxay aad ugu adag yihiin xagashada iyo marka labaad, way fududahay in laga xoreeyo dhammaan dhibcaha.
Taarikada Slate kaliya maaha inay soo jiidato naqshadooda weyn oo soo jiidashada leh, laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo kala duwanaanshahooda shaqo. Waxaa loo isticmaali karaa sidii miis dejiyeyaal loogu talagalay dejinta miiska, sidii taarikada loogu talagalay suxuunta sharafta leh, kaniiniyada ama xeebaha ubaxa iyo waxyaabo kale oo badan.
Haddi ay ahaan lahayd meel-qurxinta oo aad ku muujin karto goobahaaga quruxda badan ama aad si toos ah u dalbato suxuunta, oo leh meel-slate meel aad qof walba ku qanciso.
Sidoo kale marka laga eego dhinaca deegaanka, looxyada slate waa doorasho aad u wanaagsan, slate waa dhagax dabiici ah oo aan loo baahnayn in la soo saaro sida alaabta kale.
Sifooyinkan oo dhami waxay ka dhigayaan meel slate ma aha oo kaliya muuqaal soo jiidasho leh, laakiin sidoo kale waxay dhalin karaan doodaha deegaanka iyo kuwa la taaban karo.
Looxyada quruxda badan ee qaabka dabiiciga ah ayaa muujinaya cidhif gaar ah, oo siinaya aasaas ciideed farmaajo, charcuterie ama appetizers. Si toos ah ugu qor looxyada farmaajada oo leh tamaashiir si aad ugu calaamadiso xulashooyinka muuqda; si fudud ugu tirtir maro qoyan. Taageerada la dareemay waxay ilaalisaa miisaska.
Rustic Style Slate Service Board - 100% Gacan-gacan oo laga sameeyay Slate Dhagaxa Dabiiciga ah, oogada dabiiciga ah ee quruxda badan ayaa ka dhigi doonta miiskaaga qadada mid gaar ah. Habka ugu wanaagsan ee loogu adeego jiiska, macmacaanka iyo appetizers. Ku fiican madadaalada, u adeegida, qurxinta iyo wax ka badan
Waxaa sameeyay Slate Dabiici ah oo Tayo Sare leh. Loox kastaa waa mid gaar ah oo geeso la jarjaray. Dahaarka saliidda macdanta si ay u soo saaraan quruxda dabiiciga ah!
Maaddada dabiiciga ah ee dabiiciga ah awgeed, waa jilicsan oo walxaha fiiqan (midiyaha, fargeetada, iwm.) ayaa laga yaabaa inay xoqaan dusha sare. MA AHA microwave-ka, weelka dhaqda, foornada iyo shooladda dusheeda. Gacmo-dhaq oo kaliya.
Waqtiga boostada: Jul-05-2021